Qorannoon Komishiinii Mirga Namaa Itoophiyaa dhiyeesse itti gaafatamummaa jalaa Woyyaanee hin baasu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Qorannoon Komishiinii Mirga Namaa Itoophiyaa dhiyeesse itti gaafatamummaa jalaa Woyyaanee hin baasu
Qorannoon Komishiinii Mirga Namaa Itoophiyaa dhiyeesse itti gaafatamummaa jalaa Woyyaanee hin baasu
By Haawii Abdusabur | Oromoon ilmaan isaa mana keessattii fi dandiitti gubbatti yoo garajabeennaan ajjeefaman ijaan arge malee oduudhaan hin dhageenne.
Komishinii Mirga Namoonaa Itoophiyaa momii yeroo dheeraadhaaf naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Kibbaatti taasifamaa tureen lubbuu namoota 669 galaafatamuu ibse. Akka ibsa Dk. Aaddisuu Gabra’igzaabeeritti, lubbuun nama hedduu kan galaafatame ‘tankaarfii madaalawaa’ woraannii mootummaan bobbaase fudhateen. Aaddisuun ajjeechaa ummata nagaa irratti raawwatame seera qabeessa jechuudhaan, hanga humna isaatti, mootummaa yakka irraa qulqulluu taasisuudhaaf carraaqeera. As biratti, kan Aaddisuu fi gooftonni isaa dagachuun irra hin turre, Oromoon ilmaan isaa mana keessattii fi dandiitti gubbatti yoo garajabeennaan ajjeefaman ijaan arge malee oduudhaan kan hin dhageenne ta’uu isaati.
Kan nama raaju komishiiniin kuni ummata Agaazii fi Federalaan ajjeefameef mootummoonni naannoo gumaa kaffaluu qaban jechuu isaati.
Gama biraatiin, gabaasni mootummaan Woyyaanee karaa Aaddisuutiin dhiyeessite kuni magaalaa Awwadaay, Roobee, Adaamii Tulluu, Naqamtee fi bakka biraattis namoonni heddu tankaarfii seeraan alaa humni waraanaa fudhate jedheen ajjeefamuu agarsiisa. Iddoo tokko tokkotti humni waraanaa daangaa ce’eera jechuun isaa fakkeesuudhaaf malee dhugaa argisiisuudhaaf hin fakkaatu. Gabaasni kuni hagamuu haa xiqqeessuu, lubbuun namaa seeraan ala galaafatamuu jala sarareera. Dhugaan jiru, humnoota ummata nagaa gombisan kana leenjisee fi eebbisee kan ummatatti bobbaase mootummaa Woyyaaneeti. Kana jechuun lubbuu galaafatame kanaaf, kan nama tokkoos yoo ta’e, kan itti gaafatamuu qabu hoogganoota mootummaa Woyyaanee muummee irra jiraniidha. Eennutu isaan gaafata garuu? Hanga namni nu gaafatu hin jirretti, guutummatti yakka raawwatame hunda haaluu mannaa hanga tokko amannee bira dabruu woyya jechuu waan filatatte fakkaata, Woyyaaneen.
Mootummaan Itoophiyaa yaakki raawwatamaa ture qaama walabaan akka qulqullaayu kan hin feeneef dhugaa dhagayuu waan hin barbaanneef. Yakki ummata irratti raawwatame kuni qaama walabaan qoratame taanaan waan heddutu gadi baya. Namoota heddu kan muka keessatti ajjeefame. Namoota heddu kan hallayyaa fi boollatti gatame. Kumaatamatu badii tokkoon maletti daandii fi manaa guuramee hidhame. Dubartoota heddutu gudeedame. Hundi tilmaaman dubbata malee hanga ammaatti suuraa yakka ummata irratti raawwatamee akka gaaritti kaase kan nutti agarsiise hin jiru. Dhugaan gaafa argamte daran akka nama dallansiistu, akka ummata kakaastu Woyyaanee jalaa waan dhokatee miti. Kanaaf kan tooftaa hundatti dhimma bayuudhaan dhugaa dhokuus irratti kan bobba’eef, mootummaan.
Gabaasni Aaddisuu Gabra’igzaabeer, yaalii dhugaa jallisuuti. Caraaqqii ummata nagaa yakkamaa taasisuuti. Kuni daran Oromotti dhukkubbii kaasa. Gabaasni jedhame kuni dhugaa Oromoon beeku dhiisee waan hin jirre kan ummatatti labsu. Kanas ta’u, bu’aan qorannoo kanaa mootummaa Woyyaanee tasa bilisa hin taasisu.
gabaasa komishiinii mirga namaa
Previous articleQaamni walabaa ajjeechaa raawwatamaa ture akka qoratuuf Itoophiyaan hin hayyamtu, jedha Haylamaaram Dassaalenyi
Next articleMootummaann wixinee seeraa dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu ni tiksa jedhe labse